प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै
मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने प्रयाेजनसहित संवैधानिक परिषदको बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अाज साँझ ५ बजेका लागि परिषद बैठक डाक्नु भएको हो ।
परिषदकाे बैठकले रिक्त रहेकाे सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ । नाम सिफारिस भएसँगै संसदीय सुनुवाई हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसदका दुवै सदनको नियमावली पारित भएर संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठनको बाटो समेत खुलेसँगै परिषद बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तकाे नियुक्तिबारे समेत छलफल हुने बताइएकाे छ ।
यसअघि विवादित प्रधान न्यायाधीश गाेपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ । साे पदका लागि यसअघि नै न्यायपरिषद सचिवालयले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशत्रय दिपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमसेर जबराको नाम पठाइसकेको छ । अाजकाे संवैधानिक परिषद बैठकले यी नाममध्येबाट एउटालार्इ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था संविधानले गरेकाे छ ।
PREVIOUS POST Previous post: आधुनिक शहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना , योजनाका काम कछुवा गतिमा
NEXT POST Next post: ट्रम्प-किम भेटवार्ता : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १२:३१